काठमाडौँ महानगरपालिकाको आठतले केन्द्रीय भवनको शिलान्यास भएको छ ।
महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले टेकु (हाल वातावरण विभाग रहेको ठाउँ)मा भूमिगत तलासहितको आठतले भवन शिलान्यास गरेका हुन्।
शिलान्यासपछि प्रमुख शाक्यले भने, “सुरुमा हरिभवनमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने भनेका थियौँ तर मुद्दा–मामिलामा अल्झिनुपरेकाले त्यहाँ भवन निर्माणको काम थाल्न पाएनौ ।” मुद्दा किनारा लागेपछि भवनलाई पुनर्निर्माण गरिने उनले भने । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
७ वर्षमा कर फिर्ता : रू. ५७ अर्ब ४९ करोडको दाबी कर...
कोरोना बीमाको भुक्तानीमा को जिम्मेवार ? यसो भन्छन् ...
बढ्यो अलैँचीको मूल्य